मैले अहिले सम्म अभिनय गरेका चलचित्र मध्ये सबै भन्दा उत्कृष्ट चलचित्र "स्टुपिड मन" :नायक जीवन लुइटेल – Namaste Filmy
मैले अहिले सम्म अभिनय गरेका चलचित्र मध्ये सबै भन्दा उत्कृष्ट चलचित्र "स्टुपिड मन" :नायक जीवन लुइटेल
अन्दाज, नाइ नभन्नु ल,नोटबुक, रिदम , मालतीको भट्टी, बिन्दास–२ लगायत दर्जनौं सफल चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नु भएका सफल नायक जीवन लुइटेललाई वर्ष ७० को “सुपर” नायकको रुपमा मूल्याकंन गरिएको छ । अत्यधिक आशा गरिएको चलचित्र नाइ नभन्नु ल २ चैत्र २८ गते शुक्रबारका दिन अल नेपाल रिलिज गरिएको छ । उहाँद्धारा अभिनित चलचित्रहरु सुकुल गुण्डा, शिशा, जाउँ हिँड पोखरा, स्टुपिड मन, रिलिजको क्रममा रहेका छन । धुन, भुलभुलैया, ठूली र छबि ओझाले निर्माण गर्ने हाल नामाकरण नभइसकेको चलचित्रमा समेत उहाँ अनुबन्धित हुनु भइसकेको छ । राम्रा चललिचत्र गुमाउन नचाहने सुपर नायक लुईटेल ऐतिहासिक चलचित्रमा अभिनय गर्न भने आतुर रहको बताउनु हुन्छ । द इभरेष्ट कला यात्रा फिल्मको ब्यानरमा र एभरेष्ट सूर्य बोहराद्धारा निर्देशत निर्माणाधिन चलचित्र “ठुली”को चितवनमा भइरहेको छायाँकनको ब्यस्त समयमा चलचित्र ठूली कै विषयमा केन्द्रित रही सुपर नायक जीवन लुईटेलसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ः
प्रश्न ः तपाईलाई विभिन्न मिडियाहरुले वर्ष ७० को “सुपर नायक”को रुपमा मूल्याकंन गरिएको छ नी ? तपाईलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
उत्तर ः मद्धारा अभिनित अधिकांश चलचित्रहरुमा मेरो चारित्रिक भूमिका र अभिनयलाई दर्शकहरुले मन पराइ दिनु भएको छ । यसको लागि म नेपाली चलचित्रका दर्शक, शुभचिन्तक तथा चलचित्रकर्मीहरुमा समेत धन्यवाद तथा आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु । उहाँहरुको यो सदासयतका कारण मैले आउने दिनहरुमा समते सशक्त अभिनयद्धारा दर्शकहरुको जित्नु पर्दछ भन्ने लागि रहेको छ । मिडियाहरुले यस वर्षको नेपाली चलचित्रको सुपर नायकको रुपमा मूल्याकंन गरिदिँदा खुशी लागेको छ । त्यो भन्दा पनि बढी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा मेरो जिम्मेवारी थपिएको पनि महसुस गरेको छु ।
प्रश्न ः हाल एभरेष्ट सुर्य बोहराद्धारा निर्देशति “चलचित्र ठूली” मा ब्यस्त रहिरहनु भएको छ । के के आधारमा तपाईले यो चलचित्रमा अनुबन्धका लागि सहमती जनाउनु भएको थियो ?
उत्तर ः निर्देशक एभरेष्ट सुर्य बोहराले “ठूली”को मुख्य भूमिकाको लागि मलाई प्रस्ताव गर्नु भयो । मैले स्क्रिीप्टको अध्ययन गरें । साहै्र नै सान्र्दभिक लाग्यो । अनि हामी तिन पटक सम्म छलफलमा बसेर सर्त संझौतामा सहमती भयौं । मलाई उहाँ जस्तो सशक्त निर्देशकसँग काम गर्ने अभिलाषा पनि थियो । अवसर जुरेको नै हो जस्तो लाग्यो । अनुबन्धित भएर अहिले चलचित्रको अन्तिम छायाँकनको क्रममा ब्यस्त भइरहेको छु ।
प्रश्न ः निर्माणाधिन चलचित्र ठूलीको कथावस्तुमा त्यस्तो के पाउनु भयो तपाईले ?
उत्तर ः चलचित्र ठूली नेपाली परिवेशको सत्य–तथ्य घटनामा आधारित कथावस्तु भइकन नि अनुसन्धनात्मक विषयवस्तुहरु समावेश भएको विशिष्ट कथा समेत रहेको पाएको छु ।
प्रश्न ः समग्रमा चलचित्र कस्तो बन्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ नी ?
उत्तर ः सर्व प्रथम त चलचित्रमा कथावस्तु र प्रस्तुतीको राम्रो संयोजन रहेको छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यस वर्ष निक्कै चर्चामा रहन सफल नायिका गरिमा पन्त समेतको अभिनय रहेको चलचित्र हो । बालकलाकार कन्चन ठकुरीले उमेरामा सानो भइकन पनि परिपक्व अभिनय प्रस्तुत गरेकी छिन । राम्रो छायाँकार शेर बहादुर लामाले दृष्यहरुको होसियारी पूर्वक कैद गर्नु भएको छ । सफल र कमान्डिङ्ग निर्देशक सुर्य बोहरा दाज्यूले चलचित्रलाई उपयुक्त संयोजनको लागि जोडतोडले लागिपरिरहनु भइरहेको छ । सबैले आ–आफ्नो कार्य सम्पादन कुशलता पूर्वक गरि नै रहेका छन् । मलाई त वर्ष ७१ को नै उत्कृष्ट चलचित्र बन्ने छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
प्रश्न ःनायक जीवन लुइटेललाई अझै यस्तो रोलमा अभिनय गर्न पाए हुन्थो जस्तो लागेको छैन ।
उत्तर ःकिन नहुनु छ जस्तो कि मैले देशक नायकहरुको निर्माण हुने चलचित्रमा उहाहरुको भूमिकामा खेल्न मन लागेको छ जस्तो कि बहादुर शाहको जीवनी या बलभद्र शिह लगायतका देशक नायकको बिषयमा बन्ने फिल्ममा खेल्न मन लागेको छ अनि मलाई एकदमै एक्शन फिल्म जस्तो कि दक्षिण भारतमा बन्ने खाले फिल्म जसमा पूर्ण एक्शन होश तेस्तो फिल्ममा पनि अभिनय गर्न मन लागेको छ ।
प्रश्न ः अहिले सम्म धेरै चलचित्रमा अभिनय गर्ने भएको छ ति चलचित्रहरुमा पनि नायक जीवन लुइटेललाई मन परेको चलचित्र कुन होला ।
उत्तर ःहुन् त् मैले अभिनय गरेका प्राय जसो सबै चलचित्र सफल नै भएका छन् तर पनि अभिनयको हिसाबले मलाई एकदमै मन परेको चलचित्र स्टुपिड मन हो जुन चलचित्र छिट्टै रिलिज हुदै छ सो चलचित्र यति उत्कृष्ट बनेको छ कि म तेस्को बयाननै गर्न सक्दिन मलाई लाग्छ यो चलचित्र स्टुपिड मन मैले अहिले सम्म अभिनय गरेका चलचित्रहरु भन्दा उत्कृष्ट बनेको र व्यवसायिक सफल हुन्छ भन्ने विश्वास राखेको छु । धन्यवाद ।
नयां लुक्समा यस्तो छ 'मुखौटा' ।
अक्षय कुमार नेपाल आउने ।